Ajụjụ | Ningbo Horizon Magnetik Teknụzụ Co., Ltd.
You na-anabata imepụta omenala?
Eeh. Anyị na-agbasi mbọ ike ịnye na ịzụlite usoro emere iji dozie nsogbu ịma aka kwa ụbọchị na nju ala ụwa na usoro magnet Neodymium. Omenala n'ichepụta ihe karịrị 70 pasent nke anyị ahịa.
Nke ọ bụla ibu na-anabata, ma price kwesịrị ukpụhọde gị iji ibu, n'ihi na mmepụta na-eri dịgasị na nke ukwu. Ibu ibu na-atụ aro ya iji belata gị na-eri na mgbe price.
Anyị nwere ike ịnabata ịkwụ ụgwọ site na T / T, L / C, Western Union, wdg Usoro nke ịkwụ ụgwọ nwere ike ịdị iche maka ndị ahịa dị iche iche. Maka ndị ahịa ọhụrụ, anyị na-anabatakarị nkwụnye ego 30% tupu oge eruo na nhazi tupu ebuga ha. Maka ndị ahịa ogologo oge, anyị na-ekwe ka okwu ndị ka mma, dị ka nkwụnye ego 30% n'ọdịnihu yana nguzogide megide B / L oyiri, 30% nkwụnye ego na nguzozi na nnweta mgbe nnata nke magnets, 100% ịkwụ ụgwọ mgbe mbupu, ma ọ bụ ọbụlagodi ụbọchị 30 mgbe nnata nke nju.
Oge ndu nwere ike ịdị iche na igwe ndọta na ndọta. Oge ndu bụ ụbọchị 7-10 maka nlele magnet nke Neodymium yana ụbọchị 15-20 maka nlele sistemụ magnet. Maka imepụta oke igwe, oge ndu bụ ụbọchị 20-30 maka ụyọkọ ala ụwa dị ụkọ, yana ụbọchị 25-35 maka nzukọ ndọta ụwa dị ụkọ. Ọnọdụ nwere ike gbanwee, yabụ anyị na-atụ aro ka ị tụlee anyị tupu ị nye iwu, n'ihi na mgbe ụfọdụ ụfọdụ mgbakọ magnetik dị na Neodymium nwere ike ịdị maka nnyefe oge.
Nwere ike ịbubata nju ma ọ bụ ngwaahịa magnetik site na ikuku?
Eeh. N'ime ugbo elu, enwere otutu ngwa elektrọnik di nkpa nke na-eche ike ike. Anyị na-eji ngwakọ pụrụ iche nke anyị iji kpuchie ike ndọta ka e wee nwee ike ibubata magnets site na ikuku n'enweghị nsogbu.
Anyị na-akwado ihe anyị na ọrụ anyị. Nkwa anyị bụ maka afọ ojuju anyị na ngwaahịa anyị. N'agbanyeghị akwụkwọ ikike ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ ọdịbendị nke ụlọ ọrụ anyị iji dozie ma dozie nsogbu ndị ahịa niile nwere afọ ojuju onye ọ bụla.
Ọnụahịa mbufe ahụ dabere n'ụzọ ị họọrọ iji nweta ngwaahịa. Ọnụ ụzọ na-apụta site n'ụlọ ruo n'ụlọ bụ ụzọ kachasị ọsọ ma dịkwa oke ọnụ. Ihu oke osimiri bụ ihe ngwọta kachasị mma maka mbupu dị arọ. Anyị nwere ike ịgụta ọnụego ọnụego zuru oke ma ọ bụrụ na ị nye ndụmọdụ nkọwa nke usoro ọtụtụ, njem na usoro mbupu.
Ee, anyị nwere ike inye ọtụtụ akwụkwọ gụnyere nkọwapụta ngwaahịa, akụkọ nyocha, RoHS, REACH, na akwụkwọ mbupu ụgbọ mmiri ndị ọzọ ebe achọrọ.